विदेशबाट फर्कनेलाई यो आएर कोरोना आयो, नआएको भए नि हुन्थ्यो नभनौँ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असार ३१, २०७७ बुधबार १७:२९:४ | पार्वती श्रेष्ठ
हामीलाई पनि डर छ । त्रास छ । त्रासले नै यस्तो व्यवहार आइरहेको छ । रोगकोे बारेमा तथ्य कुरा थाहा नभएर हो । के गर्दा सर्छ, के गर्दा सर्दैन, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने तथ्य कुरा त्यति थाहा नभएर हो त्यो खालको व्यवहार भइरहेको।
त्यसैले कोरोनाको बारेमा सत्यतथ्य जानकारीसँगै लागिहाले पनि मरिंदैन भन्ने जस्तो तथ्यमा समुदायका मानिस जानकार हुनु पर्‍यो । सुरु सुरुमा चिनियाँ भाइरस भनियो । तर यो ठाउँ र जाति विशेष भन्दैन, रोगले भेदभाव गर्दैन ।
महामारीका बेलामा हामीले गरेका व्यवहारले अरु समस्या पनि आउन सक्छ । अरुले के भन्ला, अरुले विभेद गर्ला भन्न डरले चाहिँ कसैलाई कोरोनाको लक्षण देखिएको छ भने पनि कुरा लुकाउने, सेवा लिन हिच्किचाउने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो भयो भने त हाम्रो समाजका लागि त यो झन् हानिकारक हुने भयो नि त ।
अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरुले स्वस्थ व्यवहार पनि गर्न नसक्ने हुन सक्छ । जस्तो क्वरेण्टीनमा पनि बसौं कि नबसौंजस्तो हुने, आइसोलेसनमा बस्यो भने झन छिःछि दूरदूर गर्ने हो कि भनेर नबस्ने हुन सक्छ । र अर्को कुरा यदि कोही व्यक्ति मानसिक रुपमा अर्थात भावनात्मक रुपमा कमजोर वा समस्यामा रहेछ भने चाहिँ हाम्रो व्यवहार र विभेदले यस्तो कुरा बढाउन मद्दत गर्छ ।
यो बेलामा एकदमै गर्नुपर्ने व्यवहार भनेको चाहिँ जुन उहाँहरुको यात्रा छ, त्यो यात्रामा हामी पनि साथ छौं भन्नु पर्‍यो र त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्‍यो । जसरी तपाईँले दुःख भोग्नु भयो, जसरी दुःखमा परेर घर परिवार, गाउँ समाजसँगै बस्न भनेर आउनुभएको छ, त्यसमा हामी तपाईँसँगै, साथैमा छौं भन्नु पर्छ ।
हामी पनि तिम्रो दुःखको एक भाग लिन तयार छौं, तिमी जति डराएका छौ हामी पनि डराएका छौं, संसार नै महामारीको चपेटामा छ भनेर उसलाई एक्लो छैनौं भन्ने महसुस गराउनु पर्छ । कतिपय अवस्थामा थाहा नपाइ पनि हाम्रो बोलीचालीमार्फत थाहै नपाई विभेद गरिरहेका हुन्छौं । हामीलाई थाहा हुँदैन, तर त्यो कुराले चाहिँ उनीहरुलाई बिझिरहेको हुन सक्छ ।
दुःख पर्दा, आपद पर्दा मानिसले आफ्नो घर र आफन्त सम्झन्छ र त्यही दुःख सामना गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर न नै हो मानिस आफ्नो ठाउँ सम्झेर आउने । त्यो हिसाबले यो नआएको भए हुन्थ्यो, यसले सबैलाई रोग सार्‍यो भन्ने कुरा कहिल्यै पनि नगरौं ।
तपाईँको गाउँमा, तपाईँको ठाउँमा कोही विदेशबाट आउनुभएको छ भने उहाँहरुको सम्मानजनक पुनःस्थापनाका लागि सबै व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । जनप्रतिनिधिदेखि परिवार, छिमेक र आफन्तको आ–आफ्नो ठाउँमा भूमिका छ । अर्को कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो भूमिका के हुन्छ ?
मैले उहाँलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु भनेर सोच्यो भने पनि धेरै नै सहयोग हुन्छ । हालखबर सोध्ने, उसको अनुभव र भावनाहरु सुनिदिने पो गर्न सकिन्छ कि ?
त्यसैगरी जनप्रतिनिधिले फर्किएर आउनेका लागि सम्मानजनक पुनःस्थापनाका लागि उहाँहरुको सहभागितासहित रोग नफैलियोस् भन्ने हिसाबले काम गर्न सकिन्छ । र यो रोगको बारेमा सत्यतथ्य जानकारी धेरैलाई थाहा भयो भने पनि डर र त्रास कम हुन्छ । मानिसहरु सावधानी अपनाउन थाल्छन् । मानिस जानकार भएपछि लान्छना पनि कम हुन्छ ।
लकडाउनमा पाइलटको अनुभव : ‘आकाशमा जहाज देख्दा उडूँ उडूँ लाग्...